WordPress ho an'ny orinasa madinidinika | Martech Zone
Asabotsy, Septambra 8, 2012 Alatsinainy 1 Febroary 2016 Douglas Karr
Na dia an-taonina aza ny olona ao amin'ny indostria izay manosika ny WordPress, dia mety ho sarotra amin'ny orinasa kely tsy misy fahaizana teknolojia amin'ny fananganana ohatra WordPress. Ity dia infographic lehibe iray izay mandehandeha amin'ny olona na ekipa amin'ny alàlan'ny zavatra tokony ho takatr'izy ireo sy apetrany rehefa manomana sy mampihatra ny tranokalan'ny WordPress izy ireo. Tiako ihany koa ity infographic ity satria mila ny mpampiasa tsindrio ny microsite mifanerasera hahita ny valiny.
Raha ny hevitro dia iray ihany ny tolo-kevitra tsy hita ao amin'ireo tolo-kevitra ireo - ary izany dia hiarahana amin'ny a serivisy fampiantranoana WordPress premier toa Flywheel. Amin'ny alàlan'ny mpampiantrano tena tsara, orinasa kely iray dia afaka mandroaka ny antsasaky ny olana amin'ireo lisitra fanamarinana ireo, ao anatin'izany ny backup, ny filaminana, ny fikojakojana, ny fahombiazany ary ny fanohanana!
Tags: ny fomba fanoratanafananganana wordpresswordpress ahoana no
Mamorona fanandramana mpanjifa farany
9 Septambra 2012 à 7:12
ANDRIAKAKY Ô! Tiavo ny fanambarana "Amin'ny hevitro" indrindra indrindra! Iza no ao anatin'ny sainy tsara no handinika izany raha manana vahaolana SaaS lehibe sy mora vidy isika izao? Eto amin'ny Tyner Pond Farm (orinasa kely mazava tsara.) Samy mampiasa Compendium sy Hubspot izahay. Mora, azo refesina ary tsy lafo. Tsy misy na aiza na aiza eto amin'ity infografika ity aho mahita na inona na inona momba ny analytics na ny fandrefesana ROI.
9 Septambra 2012 à 9:38
Ny olona dia tena manambany ny loharano ilainy amin'ny fananganana fampiharana matihanina amin'ny WordPress. Mihevitra izy ireo fa “maimaim-poana” izany ary avy eo dia mahita tsikelikely ny olana rehetra momba ny fanamboarana, plugins, maritrano, backup ary fiarovana. Tianay ny WordPress saingy manana mpamorona sy mpamorona WordPress amin'ny fotoana feno izahay… tsy dia betsaka loatra ny orinasa manana ireo loharano ireo!
Dec 13, 2012 amin'ny 2: 33 AM
Misaotra nampianatra ahy ny fomba fitantanana orinasa kely. WordPress dia tena azo itokisana ary manana infographic azo antoka. Izany dia zavatra izay hahasoa ny orinasa maro, satria mety ho antony fanampiny ho an'ny olonao.